Izici nokuhlukaniswa kwensimbi yokusika / yokusika, ububanzi bokusetshenziswa kwensimbi yokusika: Empilweni yansuku zonke, uma siyinaka, kuvame ukuba nenqubo yokusika ekuhlobiseni kwasekhaya. Kusika phansi, insimbi, ukhuni, noma ezinye izinto ezifisayo ...
Isando sikagesi kancane luhlobo lwegesi yokujikeleza isando sokujikeleza kagesi ngokuphepha okunamathiselwe okunamathiselwe nge-pneumatic hammering mechanism. Ingavula izimbobo ezingama-6-100 mm ezintweni ezilukhuni njengokhonkolo, izitini, itshe, njll., Ngokusebenza kahle kakhulu. ...
I-Hole opener, eyaziwa nangokuthi ama-hole saw or hole hole, isho isaha ekhethekile eyisiyingi yokwenza imingxunya eyindilinga embonini yanamuhla noma kubunjiniyela. Kulula ukusebenza, kulula ukuyiphatha, iphephile futhi isetshenziswa kabanzi. Ku ...